परीक्षण गरिएजति सबैको पीसीआर पोजिटिभ ! यस्ताे कसरी भयाे ? – Sudarshan Khabar
परीक्षण गरिएजति सबैको पीसीआर पोजिटिभ ! यस्ताे कसरी भयाे ?
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गत बुधबार को’भिड–१९ पहिचानका लागि १ सय १४ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैको पो’जिटिभ नतिजा आयो ।
२४ घण्टामा सबैभन्दा बढी ७ सय ४० जनामा संक्र’मण पुष्टि भएको दिन गत शुक्रबार धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको ६५ नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा सबै नतिजा पोजिटिभ देखिएको थियो ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीका अनुसार हालसम्मका परीक्षणमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र पोजिटिभ आउने गरेको देखिएको छ । प्रयोगशालामा राखिएको किट सही तरिकाले प्रयोग नभएर सबै पोजिटिभ आएको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस दिन संक्रमण नभएका व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिएको हुन सक्छ । तर यो गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालगायत प्रयोगशालालाई यसबारे खोजबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
इपिडिमियोलजीले पीसीआरको रिएजेन्टसमेत जाँच गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने पीसीआर परीक्षणको विश्वसनीयता संकटमा पर्न सक्ने भएकाले उच्च स्तरबाटै यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
प्रयोगशाला विशेषज्ञ एवं पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक उमेशप्रसाद गुप्ताले कुनै एउटा ठाउँको नभई धेरै ठाउँबाट संकलन गरिएका सबै नमुना एकै पटक पोजिटिभ हुनै नसक्ने बताए । उनले भने, ‘एकै दिन हालिएका सबै नमुना पोजिटिभ देखिनुका तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो कन्टामिनेसन (दूषित हुनु) हो ।
तर हालसम्म किट शतप्रतिशत कन्टामिनेसन हुने गरेको छैन । दोस्रो प्रोटोकलमा रहेको सिटिभ्यालु राम्ररी विश्लेषण गर्न नसक्दासमेत यस्तो हुन सक्छ । पीसीआर किटको लट नै खराब हुँदा पनि यस्तो नतिजा देख्न सकिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले त्यस दिन पोजिटिभको मात्र रिपोर्टिङ भएको दाबी गरे । ‘कहिलेकाहीं त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा मिलाएर पठाउँछन् ।
कहिलेकाहीं पोजिटिभ नतिजाको मात्र रिपोर्टिङ गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं अति उच्च जोखिमको नमुना संकलन गर्दा पोजिटिभ हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।’
डा. बीसीका अनुसार सबैभन्दा बढी ७ सय ४० नमुनामा पोजिटिभ देखिएको दिन शुक्रबार सबैभन्दा बढी उच्च संक्रमण दर १६.४ प्रतिशत देखिएको थियो । ‘यो फल्स पोजिटिभ नतिजा आएर देखिएको हो ।’ उनका अनुसार सरकारले यो विषयमा व्यापक खोजबिन गर्नु आवश्यक छ । इपिडिमियोलजीका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले प्रत्येक प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रयोगशालाहरूको नियमन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । परीक्षण गरिएजति सबैको पीसीआर कसरी पोजिटिभ ? शिर्षकमा कान्तीपुर दैनिकमा खवर छ ।